हराएको ७ वर्षपछि भेटियो स्कुटर, भन्छन- ‘कर तिर्नु भन्दा खाडलमा पुरिदिनु बेस’ – साँचो खबर
हराएको ७ वर्षपछि भेटियो स्कुटर, भन्छन- ‘कर तिर्नु भन्दा खाडलमा पुरिदिनु बेस’
काठमाडौं : काठमाडौं, पेप्सिकोलाका मणिकुमार केसीको स्कुटर हराएको गत शनिबार ठ्याक्कै सात वर्ष पुग्यो । यतिञ्जेल उनको हराएको स्कुटरको धुमिल स्मृति मात्र बाँकी थियो। साथमा रहेको ब्लुबुकले उनलाई विगतको नमिठो सम्झना भुल्न दिएको थिएन। भर्खरै किनेको त्यो स्कुटर हराएको ७ वर्ष २ दिनपछि मणिकुमारलाई सोमबार महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले फोन गर्‍यो।
महाशाखाले उनको स्कुटर भेटिएको सुनाए। महाशाखाले हुलिया बताएको स्कुटर उनकै रहेछ । स्कुटर भेटिएको खबर सुनेर फुरूंग हुँदै उनी महाशाखा पुगे। तर खुसी धेरैबेर टिकेन । जब उनले बा ४५ प ३३०१ नम्बरको आफ्नो स्कुटर देखे, विरक्त भए। उनको स्कुटर कवाडखाना जाने अन्तिम तयारीमा थियो। महाशाखाले कार्यक्रमै गरेर स्कुटर हस्तान्तरण गरिदियो।
तर मणिकुमारलाई सामान भेटिनुको उत्साह हस्तान्तरण गर्न सकेन । स्कुटरको नाजुक हालत देखे पछि उनको अनुहारमा दिक्दारी स्पष्ट देखिन्थ्यो । ‘यस्तो हालतमा भेटिनुभन्दा बरू नभेटिएकै जाती हुन्थ्यो । हराएको १-२ वर्षसम्म त स्कुटर भेटिएला र चढौंला भन्ने आशा पनि थियो। पछिपछि त मायै मारेर बसेको थिएँ। अहिले स्कुटर भेटियो। तर के गर्नु स्टार्ट समेत हुँदैन।
अब यस्तो सामान पाएर पनि के गर्नु?’ उनले गुनासो मिश्रित प्रश्न पोखे। कलेज पढ्दै गर्दा पार्ट-टाइम अध्यापन गर्थे मणिकुमार। एकै समयमा शिक्षक र विद्यार्थीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भएपछि स्कुटरको साथ रोजेका थिए । आफन्तकहाँ खाना खान जाँदा उनको सहयात्री बाटैबाट हराउला भन्ने उनलाई हेक्कासम्म भएन। त्यो रात आफूले खाएको खानाको निकै महंगो मूल्य चुकाउनु परेकामा उनलाई अहिलेसम्म थकथक लाग्छ।
‘नयाँ स्कुटर हरायो। जीवन संघर्षमा सहयोग होला भनेको उल्टो भार थपियो,’ मणिकुमारले भने, ‘अत्यावश्यक भएर डेढ वर्षपछि सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक किनेँ। अहिले त्यसमै हिँडिरहेको छु ।’ वर्षौंसम्म हराएको सम्पत्तिको हालत देख्दा मणिकुमार मन जति अमिलो भयो, त्योभन्दा बढी चिन्ता अर्कै भएको छ- स्कुटर बनाउने खर्चभन्दा बढी तिर्नुपर्ने सवारी कर। सात वर्ष हराएको स्कुटरको कर तिरिएको छैन।
‘१५–२० हजार रूपैयाँ स्कुटर बनाउनै लाग्ला। स्कुटर भेटेका बेला त्योसम्म ठिकै छ भन्न हुन्थ्यो। तर मैले चलाउँदै नचलाएको ७ वर्षको कर किन तिर्ने,’ उनी प्रशासनसँग प्रश्न गर्दै त्यसलगत्तै हिनताबोधको भावमा भन्छन्, ‘त्यसरी त स्कुटर बनाउन र कर तिर्दै ५० हजार सकिन्छ। स्कुटर बेच्यो भने त्यति पनि आउँदैन। कर तिर्नु परेको खण्डमा त बरू खाडल खनेर पुरिदिन्छु। यही बेस हुन्छ।’ भिडीयो
अब लाइसेन्स ट्रायलमा सामान्य गल्तीले फेल नहुने !
January 13, 2021 January 13, 2021 Deep Devkota
नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट : परामर्शका लागि नौ कम्पनीको आवेदन
Previous: राजकुमार ह्‍यारीकी पत्‍नीको खुलासा: मेरो गर्भपतन भयो !
Next: थप १९४८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, कहाँ कति थपिए